Kahor kulanka Manchester derby Mino Raiola oo hadlay sida uu haatan yahay xiriirka u dhexeeya Pogba iyo Mourinho – Gool FM
(Manchester) 11 Nof 2018. Wakiilka Paul Pogba ee Mino Raiola ayaa xaqiijiyay in xiriirka laacibka reer France iyo Jose Mourinho uu haatan noqday mid aad u wanaagsan.
Xiriirka Pogba iyo Jose ayaa ahaa mid aad u xun tan iyo bilawga xili ciyaareedkan, taasoo xitaa sababtay in laacibka reer France lala xiriiriyo in uu ku biiriyo midkood kooxaha Real Madrid, Barcelona iyo Juventus.
Laakiin waxay xaalada haatan u muuqataa mid ka wanaagsan sidii hore gaar ahaan xili uu Paul Pogba kusoo wada bilaawday kulamadii dhawaa ay kooxda Manchester United ka ciyaartay dhamaan tartamada kala duwan.
Mino Raiola ayaa wareysi uu dhawaan ka bixiyay shabakada “Sky Sports” ee dalka England ayaa wuxuu kaga hadlay sida uu haatan yahay xiriirka u dhexeeya Pogba iyo Jose.
“Paul Pogba wuxuu haatan hagaajiyay xiriirka kala dhexeeya Jose Mourinho”.
“Pogba wuxuu haatan u muuqdaa mid faraxsan, sababtoo ah wuxuu dareensan yahay inuu muhiim u yahay Manchester United, xitaa hadii uu Juventus wadnaha ku hayo”.